အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: October 2009
တို့ ကမ္ဘာကြီးလဲ မြန်မြန်နေကောင်းပါစေသား
all fotos credit goes to BS
thanks dude for let me use your art
Posted by တီချမ်း at 10:52 AM4comments: Links to this post
Covered with crowd
“Love me not?”
Posted by တီချမ်း at 9:56 PM 8 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 3:08 PM7comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 1:04 PM 28 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 2:11 PM 12 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 3:54 PM 26 comments: Links to this post
ရှိသမျှအကုန်ကို စည်းကမ်း ကလာနားတွေနဲ့
အဲ့တာမှ အရာရာ လှပနေတော့မှာလေ
စိတ်ထဲက ချမပစ်နိုင်တဲ့ ဝန်တွေ
Posted by တီချမ်း at 10:28 PM2comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 11:28 AM5comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 12:38 AM3comments: Links to this post
ဗုဒ္ဓ ပြောတဲ့ အဖြစ်နဲ့အပျက်
ဒါဝင် ရဲ့ အဆို
သံ၊ ကြေးနဲ့ စက်မှု
နာဂစ် နဲ့ ဆူနာမီ
နောင်မကြာမယ့် တုံးတော့မယ် အမျိုး
လေလံယူ လကမ္ဘာ က အကွက်
မကြောက်ဘူးလား ၅၀၀ နဲ့ ၅၀
မကြာပါ နောင်လာမယ် ၂၀၁၂
Posted by တီချမ်း at 12:12 AM3comments: Links to this post
(Before and after…me!)
တိမ်စိုင်လွင့်လွင့် တွေ ကိုချစ်တဲ့ကျတော်
ခံစားရတဲ့ အရသာ ကိုကြိုက်လို့
ဆိုင်ကယ် ကိုအရှိန် ပြင်းပြင်း
လူတွေ ကားတွေ ယာဉ်မျိုးစုံတွေ
ဥဒဟို သွားလာ ပိတ်ဆို့
ဇောတွေနဲ့ လှောင်ပြည့် လျှံကျနေတဲ့
Taxi (တက်စီ) ကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတား
နားထဲ ကို IPod (အိုင်ပေါ့) လေးထည့်
“ပြုလုပ်” လေအေးအေးလေး ကိုရှူ
ခဏတာ ထွက်ပြေးနည်း ကို
On the road of Bkk
အရင်တပတ် ကမဲစောက်သွားလည်အပြီး အရှိန်မသေသေးလို့
Posted by တီချမ်း at 5:57 PM 10 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 11:27 PM2comments: Links to this post
မိညီမ ကိုအားကျလို့ပါ ပိန့် နဲ့ လုပ်ထားတာ
ဒီပုံ တင်နေရင်းနဲ့ ဂျူး ရဲ့ “အရောင်များနဲ့ကစားခြင်း” ကိုသတိရနေမိသေးတယ်
နောက် မဆီမဆိုင် ဘာလို့ “တတိယမြောက်ညနေ” ကိုလဲသတိရမိလဲမသိပါဘူး
အဲ့ဒီဝတ္ထု တို နှစ်ပုဒ် ကိုအမြဲ လိုလို တပုဒ်ထဲလို့ပဲ ထင်မြင်နေမိတယ်
ကိုယ်တခုခု သို့ နှစ်ခုခု သို့ သုံးခုခု များ မှားနေပြီလား???
အစကတော့ သီတင်းကျွတ်ဆိုတဲ့ ကဗျာ မိဘုတ်နဲ့ရေးထားတာ တင်မလို့ပါ
ပုံရှာတာ မတွေ့သေးလို့ နောက်မှ ဘဲတင်တော့မယ်
Posted by တီချမ်း at 11:09 AM9comments: Links to this post
I don't know whether it is good to startafirst sentence ofapeom with stink toilets...haha
Anyway I'm gonna start my first line with it....
If you don't agree just accept it as "me"
Posted by တီချမ်း at 11:02 PM2comments: Links to this post